बुवाले छोरी भएरै जन्मेको कारण हेला गरेकी पुजा शर्मा कसरी बनिन् चर्चित नायिका ? (भिडियो हेर्नुस्) – Sudarshan Khabar
बुवाले छोरी भएरै जन्मेको कारण हेला गरेकी पुजा शर्मा कसरी बनिन् चर्चित नायिका ? (भिडियो हेर्नुस्)
काठमाडौं । अहिलेकी चर्चीत नायीका हुन् पुजा शर्मा । उनी नेपाली सिने क्षेत्रमा ब्यस्त नायीका पनि हुन् । पछिल्लो समय नायीका शुष्मा कार्कीसंगको विवादका कारण पनि उनी चर्चामा छन् । २०४९ साल वैशाख १८ गते सिन्धुपाल्चोकमा जन्मेकी उनको बाल्यकाल देखि नै संघर्षपूर्ण भए । बुवाले छोराको चाहना राखेका र उनी छोरी भएर जन्मेका कारण पुजा र उनकी आमा दुर्गाले जिवनमा कहिल्यै परिवारवाट माया पाएनन् ।
आमाले पुजालाई काठमाडौंमा ल्याएर राम्रो विद्यालयमा भर्ना गरिन् । अनि आफुले निकै मेहनत गरेर पैसा कमाउन थालिन् । उनले छोरीलाई राम्रो भविष्य दिन निकै संघर्ष गरेर पैसा कमाइन् । उनले एसएलसी पास गरेपछि पढाईसंगै एउटा एनजिओमा पनि काम गर्न थालिन् ।उनले आफ्नो जिवनमा एउटा मोड आएको थाहा पाइन् । उनलाई पढाई भन्दा पनि उनलाई अरु काममा रुचि लाग्थ्यो ।
नाच्ने र अभिनय गर्ने काम गर्न उनलाई मन पराउँथिन् । उच्च शिक्षा पढ्न क्यानडा गएकी उनी पढाइ पुरा नगर्दै फर्किइन् । उनले टुरिजम फिल्डमा लागेर पढ्न र काम गर्न थालिन् । पुजा सानै देखि सुगम पोखरेलको फ्यान थिइन् । पछि उनै सुगमलाई भेटेपछि अभिनय तर्फ उनको पहिलो पाइला अघि बढाइन् । तर त्यतीबेला उनलाई आफैले गरेको अभिनय भने त्यती मन पर्दैनथ्यो ।
अन्तिम पटक अपडेट गरिएको : May 22nd, 2020,
भिडियो, मनोरंजन, समाचार